FFP3 မျက်နှာဖုံးထောက်ပံ့သူများနှင့်စက်ရုံ - China FFP3 မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သူများ
ထူးခြားချက်များ： ၁။ Meltblown အထည်သည် polypropylene ကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ fiber fiber အချင်းသည် 0.5-10 microns သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အရည်ပျော်သောအ ၀ တ်သည်လေကောင်းလေစစ်နိုင်ပြီးမျက်နှာဖုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းလည်းကောင်းသည်။ ၂။ အလွှာစုံမရှိသောအဆိပ်မရှိသော၊ မတည့်သော၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၃။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာအသွင်အမျိုးမျိုးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပတ်တီးချောင်းများနှင့်ထည့်သွင်းထားသည့်အမြှုပ်ကူရိုးများကိုညှိပါ။ 4. တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများ၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ လျှောက်လွှာ: ၁။ လျှောက်လွှာ။ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ high ၁။ အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများ၊ 2. ၉၅% စီစစ်ခြင်း၊ သင့်အတွက်ဘက်တီးရီးယားပိုးများနှင့်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ၃။ သင့်အားလေထဲရှိအမှုန်များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများမှကာကွယ်ပါ။ 4. ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပုံစံနှင့်အရွယ်အစားများအတွက် elastic ကြိုးနှင့်ချိန်ညှိနှာခေါင်းကလစ်။ အသုံးပြုခြင်း ၁။ လျှောက်လွှာ။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ SPAs၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ အလုပ်ခွင်များစသဖြင့် ၂။ လျှောက်လွှာများ။ ၃ ။
： သွင်ပြင်လက္ခဏာများ use ၁။ နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ။ ၂။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း ၃ ၃ ။ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များစသည်တို့။ ၃။ သဲလွန်စအော်ဂဲနစ်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အနံ့များကိုကာကွယ်ခြင်း ၄။ ကြိတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ sawing နှင့် bagging များပြုလုပ်ရာတွင်အမှုန်များကာကွယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ ...